Prateek Daily: खेलकूद
Showing posts with label खेलकूद. Show all posts
राष्ट्रिय टोलीको गोलकीपर प्रशिक्षकमा मल्ल
काठमाडौं, २१ साउन/रासस
नेपाली राष्ट्रिय फूटबल टोलीको गोलकीपर प्रशिक्षकमा विकास मल्ललाई नियुक्त गरिएको छ। अखिल नेपाल फूटबल सङ्घ (एन्फा)को प्राविधिक समितिले मल्ललाई गोलकीपर प्रशिक्षकमा छनोट गरेको हो।
ते–ह वर्षसम्म राष्ट्रिय फूटबल टोलीका महत्वपूर्ण सदस्य रहेका मल्ल नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबका पूर्वकप्तान एवं गोलकीपरसमेत थिए। मल्लले सन् २००५ देखि सन् २०१३ सम्म राष्ट्रिय टोलीबाट फूटबल खेलेका थिए।
मल्ल एन्फा एकेडेमीको उत्पादन हुन्। उनले राष्ट्रिय टोलीमा जापानी गोलकीपर प्रशिक्षक हिरो मिट्सुमारूको स्थान लिने एन्फाले जनाएको छ। फिफा विश्वकप, २०२२ र एएफसी एशियन कप, २०२३ लाई ध्यानमा राख्दै मल्ललाई गोलकीपर प्रशिक्षकका रूपमा छनोट गरिएको हो।
काठमाडौं, १९ साउन/रासस
क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सिपिएल) खेल्नका लागि ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो गएका नेपाली क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई १४ दिनको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। सिपिएल खेल्ने सन्दीपलगायत सम्पूर्ण खेलाडीलाई आइतवारदेखि क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो।
सिपिएल आगामी भदौ २ गतेदेखि शुरू हुँदैछ। “प्रतियोगिताअघि सबै खेलाडीले अनिवार्य १४ दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने आयोजकले नियम बनाएको छ, त्यसै अनुसार अन्य खेलाडीले जस्तै सन्दीप पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपरेको हो,” उनका व्यवस्थापक रमन शिवाकोटीले भने। यसबीचमा सन्दीपले आफ्नो पिसिआर परीक्षणसमेत गराउनुपर्ने उनले बताए। “पिसिआर परीक्षणपछि मात्र त्यसको नतीजा हेरेर सिपिएल खेल्न पाइनेछ,” उनले भने।
सन्दीप कोरियन एयरको चार्टर्ड जहाजमार्फत् बिहीवार दक्षिण कोरिया र त्यहाँबाट अमेरिका हुँदै ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो गएका हुन्। सरकार र अन्य विभिन्न निकायको सहयोगमा उनी टोबागो जान सफल भएका हुन्। टोबागो उड्नुअघि सन्दीपले गत मङ्गलवार पिसिआर परीक्षण गराएका थिए। सोको नतीजा नेगेटिभ आएपछि मात्र टोबागो उड्न सहज भएको व्यवस्थापक शिवाकोटीले बताए। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान आगामी भदौ १ गतेदेखि मात्र खोल्ने निर्णय गरेका कारण केही समय सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल भएको थियो।
युरोपेली च्याम्पियन्स लिग फूटबल यसै साता शुरू
पेरिस, १९ साउन/एएफपी
कोरोना भाइरसका कारण करीब पाँच महीना स्थगित गरिएको युरोपेली च्याम्पियन्स लिग र युरोपा लिग फूटबल यसै साता पुनः शुरू हुँदैछन्।
युरोपेली मुलुकहरूमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण तीव्र भएसँगै दुवै प्रतिस्पर्धा गत मार्चमा एकाएक स्थगित गरिएका थिए।
युरोपेली फूटबलको सर्वोच्च निकाय (युइएफए)ले युरो–२०२० लाई एक वर्ष पछि सार्ने निर्णय गरे पनि क्लबस्तरीय दुई प्रतिष्ठित प्रतियोगिता च्याम्पियन्स लिग र युरोपा लिगका बाँकी खेल सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने अन्योल थियो।
अन्तमा युरोपेली फूटबल महासङ्घले एउटा जुक्ति निकालेको छ। दुवै प्रतिस्पर्धाका खेल निर्धारित एउटै रङ्गशालामा खेलाइनेछ। यी खेलहरूमा दर्शकलाई प्रवेश गराइनेछैन।
च्याम्पियन्स लिग आगामी अगस्त १२ मा शुरू हुनेछ र अन्तिम आठका सबै खेल पोर्चुगलको लिस्बनमा खेलाइनेछ। फाइनल खेल भने अगस्त २३ मा बेनिफिकाको खेल मैदान एस्टाडियो डा लुजमा हुनेछ।
यस्तै, युरोपा लिगका सबै खेल जर्मनीका विभिन्न रङ्गशालामा यही अगस्त १० देखि खेलाइनेछ र फाइनल खेल अगस्त २१ मा कोलोनमा हुनेछ।
युइएफएका अध्यक्ष अलेक्सान्डर सेफेरिनले अर्को सूचना नभएसम्म दर्शकविना दुवै प्रतिस्पर्धा आयोजना गरिने बताउँदै कुनै जोखिम लिने स्थितिमा नरहेको जानकारी दिए। रासस
सिपिएल खेल्न सन्दीप बिहीवार जाने तय
on 5:21:00 PM0Comment
काठमाडौं, १४ साउन/रासस
नेपाली क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछाने क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सिपिएल) खेल्न जाने तय भएको छ। उनी सिपिएल खेल्न बिहीवार ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोतर्फ जानेछन्।
कोरियन एयरको चार्टर्ड जहाजमा सन्दीप टोबागो जान लागेको उनका व्यवस्थापक रमन शिवाकोटीले जानकारी दिए। यसअघि हवाई उडानको यकीन नहुँदा उनी टोबागो जानेबारे अन्योल थियो। “बिहीवार उड्ने पक्कापक्की छ, अब कुनै द्विविधा छैन,” शिवाकोटीले भने। सरकार र अन्य विभिन्न निकायबाट सहयोग प्राप्त भएपछि सन्दीप टोबागो जान सहज भएको उनले बताए। टोबागो उड्नुअघि उनले मङ्गलवार पिसिआर परीक्षण गराएका छन्। सन्दीपले सानेपास्थित स्टार हस्पिटलमा स्वाब परीक्षणका लागि दिएका छन्। परीक्षणको नतीजा आज आउने व्यवस्थापक शिवाकोटीले बताए।
सिपिएल खेल्नका लागि सन्दीप साउन १७ गतेसम्म पुगिसक्नुपर्नेछ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान आगामी भदौ १ गतेदेखि मात्र खोल्ने निर्णय गरेपछि सन्दीपलाई क्रिकेट खेल्नका लागि विदेश जान समस्या भएको थियो। सरकारले सहयोग गरेकै कारण सन्दीपको टोबागो यात्रा सहज भएको हो। उनले टोबागो पुगिसकेपछि १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ।
सन्दीप यस यामको सिपिएलका लागि जमैका तल्लावाहजबाट अनुबन्धित भइसकेका छन्। उनलाई जमैकाले १ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर (रु एक करोड ५६ लाख)मा अनुबन्ध गरेको हो। उनी उक्त टिमको मार्की खेलाडी पनि हुन्। सन्दीपले यसअघि पहिलो र दोस्रो संस्करणको सिपिएल खेलिसकेका छन्। सिपिएल आगामी भदौ २ देखि भदौ २५ गतेसम्म चल्नेछ।
काठमाडौं, १० साउन/रासस
नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सिपिएल) खेल्नेबारे अन्योल भएको छ। सन्दीपले सिपिएल खेल्नका लागि अबको एक साताभित्र ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो पुगिसक्नुपर्नेछ। यसका लागि अहिलेसम्म उनको हवाई उडानको कुनै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।
हवाई उडानको टुङ्गो लाग्न नसक्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्न पाउनेबारे यकीन हुन नसकेको उनका व्यवस्थापक रमन शिवाकोटीले बताए। “ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो कसरी पुग्ने भन्नेबारे सोच्नै सकिएको छैन,” उनले भने, “सिपिएल खेल्नका लागि सन्दीप साउन १७ गतेसम्म पुगिसक्नुपर्ने हुन्छ,” शिवाकोटी नेपाली क्रिकेट टोलीको भिडियो एनालिस्ट पनि हुन्।
सरकारले गत बुधवार बन्दाबन्दीको अन्त्य गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान भने कोरोना भाइरसको कारण आगामी भदौ १ गतेदेखि मात्र खोल्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको उक्त निर्णयका कारण सन्दीपलाई क्रिकेट खेल्नका लागि विदेश जान समस्या भएको हो। “सन्दीप टोबागो कसरी पुग्ने भन्नेबारे विभिन्न निकायसित सल्लाह गरिरहेका छौं,” व्यवस्थापक शिवाकोटीले भने।
सरकारले हवाई यात्राका लागि पहल गरिदिए सन्दीपले सिपिएल खेल्ने सम्भावना रहेको शिवाकोटी बताउँछन्। “सन्दीपको व्यक्तिगत पहलले टोबागो पुग्न सक्ने अवस्था छैन,” उनले भने, “त्यहाँ पुग्ने सरकारको सहयोगबाहेक अरू कुनै उपाय छैन।” सन्दीपको टोबागो यात्राबारे आज पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयलगायत सरकारी निकायसित आवश्यक सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने शिवाकोटीले बताए। सरकारको सहयोगले एउटा नेपाली खेलाडी विदेशमा खेल्न सक्ने र खेलका माध्यमले विदेशमा नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठा बढ्ने उनको बुझाइ छ।
एक साताभित्र सन्दीप टोबागो पुग्न नसके उनले सिपिएल गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ। “उता पुगिसकेपछि पनि १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ,” शिवाकोटीले भने, “हामीसित समय निकै कम छ, सरकारले आजभोलिमैं पहल गरिदिए सन्दीपले सिपिएल खेल्ने सम्भावना रहन्छ।” सन्दीप यस यामको सिपिएलका लागि जमैका तल्लावाहजबाट अनुबन्धित भइसकेका छन्। उनलाई जमैकाले एक लाख ३० हजार अमेरिकी डलर (रु एक करोड ५६ लाख)मा अनुबन्ध गरेको हो। उनी उक्त टिमको मार्की खेलाडी हुन्। सन्दीपले यसअघि पहिलो र दोस्रो संस्करणको सिपिएल खेलिसकेका छन्। यस यामको सिपिएल आगामी भदौ २ गतेदेखि भदौ २५ गतेसम्म चल्नेछ।
गाउँमा थुप्रिएका युवाहरू खेलकूदमा व्यस्त
प्रस, सेढवा, ३० असार/
लकडाउनमा देशविदेशबाट पर्साका ग्रामीण क्षेत्रमा आएका युवाहरू अहिले खेलकूदमा व्यस्त छन्।
लकडाउनको कारण घर बसाइमा रहेका युवाहरू अहिले फूटबललगायतका खेलकूदमा व्यस्त छन्। खासगरी अध्ययन गर्न बाहिरिएका विद्यार्थीहरू घर फर्केपछि दिनभरि अनलाइन शिक्षा र साँझपख फूटबलमा व्यस्त हुने गरेका छन्। ठोरी, जीराभवानी, जगरनाथपुर, पटेर्वासुगौली, सखुवाप्रसौनीलगायतका स्थानीय तहमा अहिले यी युवाहरू फूटबलमा व्यस्त भएको देख्न पाइन्छ। वर्षायामले हिलाम्य भएको चौरमा पनि युवाहरू फूटबल खेलिरहेका छन्। यसअघि गाउँमा युवाहरूको सङ्ख्या पातलिएको बेला खेलकूदका क्रियाकलाप दुर्लभ हुने गरेको थियो। अहिले गाउँका प्रायः चौरहरूमा फूटबल खेल भइरहेका छन्। पटेर्वासुगौली गापा–३ देकुलीका गौरीशङ्कर चौधरीले सानो–ठूलो सबैखाले चौरमा युवाहरूको भीड हुने गरेको बताए। उनले पहिले खेलका लागि युवाहरू गाउँमा नभेटिने गरेको तर अहिले लकडाउनको कारण तीन–चार महीनादेखि गाउँमा फूटबल खेल्नेहरूको सङ्ख्या बढेको बताए।
अहिले खेलाडीहरूको सङ्ख्या बढेपछि आलोपालो गरेर खेलिंदैछ। जीराभवानी गापा–२ सेढवाका सन्तोष चौधरीले रोजगारविहीन भएर फर्केका युवाहरू गाउँमा समय बिताउन फूटबल खेलिरहेको बताए। गाउँमा खेलमैदान थोरै छ तर अहिले खेलाडीहरू धेरै भएपछि गाउँटोलका खुला चौर, पर्ती जग्गामा फूटबल हुने गरेको छ।
जीराभवानी गाउँपालिका–५ शङ्करसरैयाका रोशन यादवले प्रायः सबै गाउँमा ६ भन्दा बढी स्थानमा फूटबल हुने गरेको बताए। दैनिक अभ्यासका साथै अहिले गाउँमा ससाना प्रतियोगिताहरू पनि शुरू भएका छन्। जीराभवानी गापा–१ शान्तिनगरका तिलकबहादुर श्रेष्ठ लकडाउनले खेलाडी उत्पादनमा वृद्धि भएको बताउँछन्।
खेलकै क्रममा अहिले गाउँमा युवाहरूबीच विवाद हुने गरेको छ। जसले गर्दा सामाजिक शान्तिमा खलल पुगेको उनको गुनासो छ। खेलको कुरालाई लिएर युवाहरू टोल, समाजमा झगडा गर्ने क्रम बढेको छ।
चार दिने टेस्ट उपयुक्त नरहेको गाँगुलीको भनाइ
नयाँ दिल्ली, २४ असार/एएफपी
भारतीय क्रिकेट बोर्डका अध्यक्ष सौरभ गाँगुलीले चार दिवसीय टेस्ट क्रिकेट उपयुक्त नरहेको बताएका छन्। क्रिकेटको विश्व निकायले टेस्ट क्रिकेटलाई पाँच दिनबाट चार दिनमा सीमित गर्नेगरी प्रस्ताव गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आइसिसी) ले सन् २०२३ देखि लागू हुनेगरी टेस्ट क्रिकेटलाई चार दिनमा सीमित गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
विगतमा दक्षिण अफ्रिका र मोजाम्बिक तथा इङ्ल्यान्ड र आइरल्यान्डबीच अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त चार दिने टेस्ट खेल भइसकेका छन्। तर भारतीय क्रिकेट बोर्डले आइसिसीको उक्त धारणाको विरोध गर्दै आएको छ।
भारतीय क्रिकेट बोर्डले आयोजना गरेको अनलाइन छलफलमा गाँगुलीले भने–“मलाई चार दिने टेस्ट खेलमा त्यति रुचि छैन किनभने मेरो विचारमा अधिकांश टेस्ट खेलको नतीजा चार दिनमा आउँदैन।”
उनले खेल चार दिनमा सीमित भएपछि खेल्ने शैलीमैं परिवर्तन आउँछ भने। उनले पाँच दिने टेस्ट खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक र उत्कृष्ट रहेको बताए।
विश्व क्रिकेट परिषद्को अध्यक्षका दाबेदारसमेत मानिएका गाँगुलीले दिवा–राति टेस्ट खेल हुन सक्ने बताए। सन् २०१८ मा अस्ट्रेलियासँग रात्रि टेस्ट खेल्न अस्वीकार गरेको भारतले गत वर्ष बङ्गलादेशसँग कोलकातामा गुलाबी बल प्रयोग गर्न सहमति जनाएको थियो।
दुर्ई खेलको यस शृङ्खला अन्तर्गत कोलकाताको खेल तीन दिनभित्रै समाप्त भएको थियो। यो शृङ्खला भारतले २–० ले जितेको थियो। रासस
सन्दीप डेढ करोडमा सिपिएलमा अनुबन्धित
काठमाडौं, २३ असार/रासस
नेपालका क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछाने क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सिपिएल) सिजन २०२० को खेलाडी ड्राफ्टमा रु एक करोड ५६ लाखमा अनुबन्धित भएका छन्। उन्नाइस वर्षीय लामिछानेलाई यस यामको सिपिएलका लागि जमैका तलावाजले गएराति एक लाख ३० हजार अमेरिकी डलरमा अनुबन्ध गरेको हो। जमैका तलावाजले उनलाई दोस्रो राउन्डमा छनोट गरेको हो। ड्राफ्टका लागि २३ देशका ५३७ खेलाडीले नाम दर्ता गराएका थिए।
सन्दीपले सिपिएलका लागि आफ्नो अनुबन्धित मूल्य ९० हजार अमेरिकी डलर तोकेका थिए। सन्दीपसँगै अफगानिस्तानका अलराउन्डर मोहम्मद नाबी र अस्ट्रेलियाका बेन डंक पनि सिपिएलका लागि एक लाख ३० हजार अमेरिकी डलरमा अनुबन्धित भएका छन्। सन्दीप सिपिएलका लागि तेस्रोपटक अनुबन्धित भएका हुन्।
यसअघि उनी सिपिएलको पहिलो संस्करण सन् २०१८ मा सेन्ट किट्स एन्ड नाभिस प्याट्रियट्सका लागि पाँच हजार तथा दोस्रो संस्करण सन् २०१९ मा बार्बाडोस ट्राइडेन्सका लागि ७० हजार अमेरिकी डलरमा अनुबन्धित भएका थिए। यस वर्षको सिपिएल ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोमा आगामी अगस्त १८ देखि सेप्टेम्बर १० तारिखसम्म आयोजना हुने भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण उक्त समयमा प्रतियोगिता हुने नहुनेबारे भने अन्योल छ।
पर्साको तीन स्थानमा मिनी रङ्गशाला निर्माण हुँदै
on 6:36:00 PM0Comment
प्रस, सेढवा, २१ असार/
पर्सा जिल्लाको दुई गाउँपालिकाको तीनस्थानमा मिनी रङ्गशाला निर्माण भैरहेको छ।
सङ्घ सरकार अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र गापाको लगानीमा जीराभवानी गापा–३ र ४ को परसवा तथा सुपौली र जगरनाथपुर गापा–४ बडगोटोलमा मिनी रङ्गशाला निर्माण भइरहेको हो।
जीराभवानी गापा–३ परसवामा रहेको करिब पाच बिघा सार्वजनिक ऐलानी जग्गामा खेल मैदान रहेको स्थानमा आव ०७६/०७७ मा सङ्घ सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र गापाको ३२ लाखमा मिनी रङ्गशाला निर्माण शुरू भएको हो। यो रङ्गशाला पर्सामा ग्रामिण भेगको सबैभन्दा चर्चित रङ्गशाला हो। बीसवर्षदेखी प्रत्येक ४/४ वर्षमा हुने परसवा गोल्डकप प्रतियोगिताको कारण यो रङ्गशाला देशमा चिनिएको हो। राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगितामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलाडीहरू सहभागी हुने भएकोले परसवा गोल्डकप नेपालमा नाम चलेको प्रतियोगिता मध्ये एक हो। गाउँस्तरमा हुने प्रतियोगितामा यसप्रकारको सहभागिता विरलै सुनिएको छ। पछिल्लोपटक परसवा गोल्डकप ०७५ सालमा भएको थियो भने आगामी प्रतियोगिता ०७९ सालमा हुनेछ। यसैगरी जीराभवानी गापा–४ सुपौलीमा पनि सङ्घ सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लगानीमा ८४ लाखमा मिनी रङ्गशाला निर्माण कार्य जारी छ। गतवर्षदेखी शुरू भएको मिनी रङ्गशाला निर्माणको काम अहिलेसम्म जारी छ। यो रङ्गशाला पनि करिब ५ विघा ऐलानी सार्वजनिक जग्गामा निर्माण भैरहेको छ। सुपौली मिनी रङ्गशालामा अहिलेसम्म स्थानियस्तरको फुटबल प्रतियोगितामा मात्र हुने गरेको छ। यसैगरी पर्साको जगरनाथपुर गापा–४ मा गाम्रिण क्षेत्रमा निर्माण हुने तेश्रो रङ्गशालाको निर्माण जारी छ। सङ्ंघ सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको रू ५० लाख लागत सहयोगमा गापाले मिनी रङ्गशालाको निर्माण कार्य गरिरहेको छ। जगरनाथपुरमा निर्मित मिनी रङ्गशालाले पनि
५ विगहा क्षेत्रफल ओगटेको छ भने जारी निर्माण कार्यमा अहिले ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको बताइएको छ। उपभोक्ता समिती मार्फत कार्य भएको र ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको गापाका इन्जिनियर बंशी चौरसियाले बताए। यो मिनी रङ्गशालाको निर्माण पनि चालु आवमा शुरू भएको हो। रङ्गशालामा अब प्याराफिटको काम मात्र बाकी छ। इन्जिनियर चौरसियाले मिनी रङ्गशालाको प्याराफिटको मात्र काम बाकी रहेको बताए।
काठमाडौं, १६ असार/रासस
बङ्गलादेशमा हुने भनिएको १३औं संस्करणको दक्षिण एशियाली फूटबल महासङ्घ च्याम्पियनशिप (साफ) प्रतियोगिता अर्काे वर्ष हुने भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण साफ च्याम्पियनशिप एक वर्ष सारिएको हो।
साफको सोमवार बसेको बैठकले साफ च्याम्पियनशिप सन् २०२१ मा गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि साफ च्याम्पियनशिप यही वर्ष सेप्टेम्बरमा गर्ने तय भएको थियो। बङ्गलादेशले लगातार दोस्रोपटक साफ आयोजना गर्ने जिम्मेवारी पाएको हो। बा–हौं साफ सन् २०१८ मा बङ्गलादेशको ढाकामा आयोजना गरिएको थियो। बा–हौं साफको उपाधि माल्दिभ्सले जितेको थियो। सो प्रतियोगितामा नेपाल सेमिफाइनलसम्म पुगेको थियो। यसैगरी, महिला र पुरुषतर्फ साफ यु–१५ च्याम्पियनशिप र साफ यु–१८ वुमन्स च्याम्पियनशिपबारे साफको अर्काे बैठकले टुङ्गो लगाउने बताइएको छ।
काठमाडौं, २७ जेठ/रासस
भर्चुअल तेक्वान्दोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय पुम्से च्याम्पियनशिपमा नेपालले दुई स्वर्ण पदक जितेको छ। प्रतियोगितामा नेपालका लक्ष्मण ऐर र दावा शेर्पाले स्वर्ण जितेका हुन्।
युएस वेस्ट कोस्ट तेक्वान्दो सङ्घ, पोर्टल्यान्ड, अमेरिकाको तत्वावधान र पान अमेरिकन तेक्वान्दो युनियन, पोर्टल्यान्डद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा नेपालका सस्मिता केसी र अर्जुन तामाङले रजत तथा रेशमाया गुरुङले कास्य पदक जिते। उक्त प्रतियोगितामा नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय निर्णायक अशोक खड्काले निर्णायकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। ते–ह सदस्यीय निर्णायकमण्डलमा एशियाबाट खड्का एक्लो निर्णायक रहेको नेपाल तेक्वान्दो सङ्घले जनाएको छ।
विश्वकप छनोटका खेल चार महीनापछि गराउने एएफसीको प्रस्ताव
काठमाडौं, २४ जेठ/रासस
एशियाली फूटबल महासङ्घ (एएफसी)ले कोरोना भाइरसका कारण स्थगित फिफा विश्वकप २०२२ तथा एएफसी एशियन कप २०२३ को छनोट खेलहरू चार महीनापछि गराउने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। नेपालले खेल्ने उक्त खेलहरू आगामी अक्टोबर र नोभेम्बरमा गराउन एएफसीले विश्व फूटबल महासङ्घ (फिफा)लाई प्रस्ताव गरेको हो।
यसअघि गत चैतमा अस्ट्रेलिया, चाइनिज ताइपेई र जोर्डनसँग छनोट खेल घरेलु मैदानमा खेल्ने तय भएपनि कोरोना भाइरसका कारण स्थगित भएको थियोे। स्थगित खेल अक्टोबर ८ र १३ तथा नोभेम्बर १२ र १७ तारिखमा गर्न प्रस्ताव गरिएको एएफसीले जनाएको छ। विभिन्न देशका फूटबल सङ्घसितको भिडियो बैठकपछि एएफसीले उक्त मितिमा खेल गराउन तयारी थालेको हो। दोस्रो चरणको छनोट अन्तर्गत नेपालले तीन खेल खेल्न बाँकी छ। ती सबै खेल नेपालले घरेलु मैदानमा खेल्नेछ।
एएफसीको प्रस्तावलाई फिफाले अनुमति दिएमा नेपालले अक्टोबर ८ मा चाइनिज ताइपेई, अक्टोबर १३ मा अस्ट्रेलिया र नोभेम्बर १२ मा जोर्डनसँग खेल्नेछ। समूह ‘बी’मा रहेको नेपालले हालसम्म पाँच खेलमा तीन अङ्क जोडेको छ। नेपालले चाइनिज ताइपेईलाई पराजित गरी उक्त समूहमा चौथो स्थान बनाएको थियो। हालसम्मको खेल प्रदर्शन अनुसार १२ अङ्कका साथ अस्ट्रेलिया शीर्षस्थानमा, १० अङ्कका साथ कुवेत दोस्रो, समान १० अङ्क नै बनाएको जोर्डन तेस्रो तथा अङ्कविहीन अवस्थामा रहेको चाइनिज ताइपेई समूह ‘बी’को पुछारमा छ।
समूहको शीर्ष टोली विश्वकपको तेस्रो चरणमा पुग्नुका साथै एशिया कपमा सोझै पुग्नेछ। दोस्रो हुने टोली विश्वकपको तेस्रो चरणमा तथा एशिया कप छनोटको तेस्रो चरणमा पुग्नेछ। तेस्रो, चौथो र पाँचौं स्थानमा रहने टोली विश्वकप छनोटबाट बाहिरिनेछन्। विश्वकप २०२२ कतारमा तथा एएफसी एशियन कप २०२३ चीनमा हुनेछ।
वीरगंज म्याराथनको तयारी पूरा
प्रस, वीरगंज, ११ फागुन/
फागुन १७ गते हुने वीरगंज म्याराथन–२०७६ को तयारी पूरा भएको छ ।
आइतवार वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोजकले जनाएको छ ।
नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेनाको पृतना २८ नं. वाहिनी जीतपुरको मुख्य आयोजन तथा वीरगंज महानगरपालिका, भिजिट नेपाल–२०२० प्रदेश नं २ र वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घको सहआयोजनमा वीरगंज म्याराथन हुन लागेको वीरगंजका नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले जानकारी दिए।
‘एकताको लागि दौड र स्वच्छ देश—स्वस्थ्य मधेस’ नाराका साथ हुने म्याराथनमा ६ हजारभन्दा बढीको सहभागिता हुने आयोजकले जनाएको छ ।
प्रतियोगितामा सहभागीमध्ये चार हजार एक सयजनालाई निश्शुल्क टिसर्ट र क्याप वितरण गरिने सेनाका जर्नल अनुपजङ्ग थापाले बताए । प्रतियोगिता सञ्चालनको लागि करीब रु ७५ लाख खर्च हुने उनले बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोपाल केडिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ता, महासचिव माधव राजपाल, नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्साका अध्यक्ष श्याम बन्जारालगायतको सहभागिता थियो ।
बारागढीमा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सम्पन्न
प्रस, बारा, ११ फागुन/
बाराको बारागढी गाउँपालिकामा पालिकास्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता–२०७६ आइतवार सम्पन्न भएको छ ।
खोपवा खेलमैदानमा भएको एक दिने प्रतियोगितामा सो गाउँपालिका अन्तर्गतका तीनवटा सामुदायिक माविका छात्र/छात्राहरूले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । गाउँपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकूद शाखाले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा भलिबल छात्रतर्पm नेरा मावि सिसहनियाले प्रथम र जनता मावि बुडगाईले दोस्रो स्थान हासिल गरेको थियो । त्यसैगरी जनता मावि बुडगाईले छात्रातर्पm प्रथम स्थान हासिल ग¥यो ।
दौडमा छात्रतर्पm गम्भीरा ब्रजकिशोर मावि गडहल पहिलो, जनता मावि बुडगाईले दोस्रो स्थान हासिल ग¥यो । छात्रा दौडमा जनता मावि बुडगाई पहिलो र नेरामावि सिसहनिया दोस्रो भयो । कबड्डीमा छात्रतर्फ गम्भीरा ब्रजकिशोर मावि प्रथम भयो भने नेरामावि सिसहनिया दोस्रो भयो ।
कबड्डी खेलमा छात्रातर्पm जनता मावि बुडगाई प्रथम, नेरामावि सिसहनिया दोस्रो भयो । विजयी तथा उपविजयी टिमका खेलाडीलाई शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो । उनीहरूलाई गाउँपालिका अध्यक्ष देवदत्त बछार थारू, उपाध्यक्ष लक्ष्मी देवी राय, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आमोद चौधरी, वडाध्यक्षद्वय कृष्णप्रसाद चौधरी, छठुराउत अहिर, शिक्षा युवा तथा खेलकूद शाखा प्रमुख रामनाथ दास, इलाका प्रहरी खोपवाका प्रमुख नरेन्द्रकुमार मरवैतालगायतले पदक तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए ।
पर्सागढी गोल्डकप ः पर्सागढी फाइनलमा
नरेश यादव, पर्सागढी, ९ फागुन/
आयोजक पर्सागढी युवा स्पोट्र्स क्लब पर्सा, बढनिहारमा जारी प्रथम पर्सा गोल्डकपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । शुक्रवार भएको खेलमा वीरगंज युथ एकेडेमीलाई १ का विरुद्ध २ गोलअन्तरले पराजित गर्दै पर्सागढी फाइनलमा प्रवेश गरेको हो ।
खेलको सुरुआती २०औं मिनेटमा पर्सागढीका सुशान्त चौधरीले वीरगंज युथविरुद्ध पहिलो गोल गरेका थिए । खेलको ४७औं मिनेटमा पर्सागढीका सुरज घिमिरेले अर्को गोल थपेर टिमलाई २ गोलको अग्रता दिलाए ।
वीरगंजको तर्पmबाट खेलको ५७औं मिनेटमा आदित्य शाक्यले १ गोल गरेर टिमलाई सान्त्वना दिए । प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा वीरगंज युथले पटकपटक मौका चुकाएको थियो । खेलको म्यान अफ दी म्याच पर्सागढीका प्रशान्त भुजेल घोषित भए । उनलाई आधारभूत विद्यालय बागवानाका प्रधानाध्यापक जोगेन्द्रप्रसाद चौधरी र स्थानीय युवा सुनील तिमिल्सिनाले नगदसहित ट्रफी प्रदान गरेका थिए ।
शनिवारको खेल हेटौंडा पूmटबल एकेडेमी र नेपाल खेलकूद क्लब चपुरबीच हुनेछ । उक्त प्रतिस्पर्धाका विजयीले फाइनल भिडन्त पर्सागढीसँग गर्ने आयोजक पर्सागढी युवा स्पोट्र्सका अध्यक्ष यामबहादुर थापाले जानकारी गराए ।
वीरगंज युवा स्पोर्ट्सलाई हराउँदै हेटौंडा विजयी
प्रस, पर्सागढी, ८ फागुन/
पर्सागढी नगरपालिका–३ को खेल मैदानमा पर्सागढी युवा स्पोटर््स क्लब बढनिहारले आयोजना गरेको प्रथम पर्सा गोल्डकपको क्वाटर फाइनल खेलमा वीरगंज युनाइटेड र हेटौंडा पूmटबल एकेडेमी हेटौंडाबीच भएको खेलमा हेटौंडा एकेडमी विजयी भयो ।
शुरूको खेलमा दुवै टिमबाट कसैले गोल गर्न सकेका थिएनन् । दोस्रो हाफटाइमको छैठौं मिनटमा हेटौंडा क्लबका रोजम लामाले पहिलो गोल गरी टिमलाई विजयी बनाएका थिए ।
खेलको बेस्ट खेलाडी लालबाबू चौधरीलाई प्रमुख अतिथि वडा नं २ का अध्यक्ष वेदमन दासले ट्रफी प्रदान गरी सम्मान गरेको आयोजक टिमका सचिव हरि थापाले बताए ।
पर्सा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा पर्सागढी
on 10:04:00 PM0Comment
प्रस, पर्सागढी, ६ फागुन/
निजगढ एफसी बारालाई हराउँदै आयोजक पर्सागढी युवा स्पोट्र्स क्लब प्रथम पर्सा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
पर्साको बढनिहारमा जारी गोल्डकपमा १ का विरुद्ध ३ गोल गर्दै आयोजक क्लब सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो । खेलको शुरू भएको २४औं मिनेटमा निजगढका समीर तामाङले गोल गरेर निजगढलाई अग्रता दिलाएका थिए । खेलको पहिलो मध्यान्तरमा १ गोलले पछि परेको पर्सागढीले दोस्रो मध्यान्तरमा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन ग¥यो ।
पर्सागढीका रमेन डङ्गोलले खेलको ५८औं मिनेट र ७७औं मिनेटमा लगातार गोल गरेर टिमलाई अग्रता दिलाए ।
खेलको ७९औं मिनेटमा पर्सागढीका सुशान्त चौधरीले गोल गरेपछि पर्सागढी ३–१ गोलअन्तरले विजयी बन्यो । खेलको म्यान अफ दी म्याच पर्सागढीका रमेन डङ्गोल घोषित भए । उनलाई पर्सागढी नगरपालिका वडा नं. ५ का अध्यक्ष असलम आलमले ट्रफी प्रदान गरे ।
प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलिको खेल वीरगंज युथ क्लब र श्याम पराजुली युवा स्पोट्र्स क्लब हेटौंडाबीच हुनेछ ।
फागुन १४ गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमले नगद एक लाखसहित प्रमाणपत्र तथा दोस्रो हुने टिमले नगद ५० हजारसहित प्रमाणपत्र पाउने पर्सागढी युवा स्पोट्र्सका अध्यक्ष यामबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
फागुन ३ गतेदेखि प्रथम पर्सा गोल्डकप फूटबल
प्रस, पर्सागढी, २६ माघ/
स्वास्थ्यको लागि खेलकूद नाराका साथ पर्सागढी नगरपालिका–३ मा आयोजना हुन गइरहेको प्रथम पर्सा गोल्डकप पूmटबल प्रतियोगिता तयारी पूरा भएको छ ।
प्रतियोगितामा प्रदेश २ र ३ का १० वटा टीम सहभागी हुने र प्रतियोगिताको तयारी पूरा भइसकेको हरि थापाले बताए । पर्सागढी युवा स्पोर्टस् क्लब बडनिहार पकडियाको आयोजनामा फागुन ३ गतेदेखि प्रतियोगिता हुन गइरहेको छ । क्लबका अध्यक्ष यमबहादुर थापाले पर्सागढी नपामा पहिलोपटक आयोजना हुन गइरहेको प्रथम पर्सा गोल्डकप प्रतियोगिता सफलताको लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । उनले खेलाडीलाई आवतजावत, बास, खाना आदिको व्यवस्थापन भइसकेको बताएका छन् ।
क्लबका सचिव सञ्जय पाठकले पर्सागढी नपा र अन्य व्यक्तिहरूसँग आर्थिक सहयोग लिएको बताए । उनले प्रतियोगितामा रू ८ लाख खर्च अनुमानित गरिएको जानकारी गराएका छन् । प्रतियोगितामा वीरगंज युनाइटेड पर्सागढी, आमोदेवी युवा स्पोर्टस् क्लब, हेटौंडा, चपुर युवा स्पोर्टस् क्लबलगायत सहभागी हुने सचिव पाठकले बताए ।
पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सम्पन्न
प्रस, पर्सागढी, २५ माघ/
पर्सागढी नगरपालिका–२ स्थित भडौरामाई युवा क्लब छतिवन टाँडीको आयोजनामा शनिवार एक दिने नगरस्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको नगरप्रमुख लोकनारायण यादवले उद्घाटन गरे । छतिवनटाँडी खेलमैदानमा भएको एक दिने भलिबल प्रतियोगितामा पाँचवटा टिम सहभागी थिए ।
आदर्श युवा क्लब पशुपतिनगर, पर्सागढी युवा स्पोट्र्स बढनिहार, भडौरामाई युवा क्लब टिम ‘बी’, भडौरामाई युवा क्लब टिम ‘ए’, जनता मावि बढनिहार सहभागी भएकोमा भडौरामाई टिम ‘बी’ प्रथम, भडौरामाई ‘ए’ टिम द्वितीय भएका थिए ।
विजयी टिमहरूलाई वडाध्यक्ष वेदमान दास थारूले नगद, शिल्ड, प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए । कार्यक्रम वडासदस्य आत्माराम अधिकारीको अध्यक्ष्Fतमा भएको थियो ।
प्रथम जिपी कोइराला गोल्डकपको उपाधि सप्तरीलाई
प्रस, वीरगंज, २५ माघ/
प्रथम जिपी कोइराला गोल्डकप नकआउट फूटबल प्रतियोगिताको उपाधि जिल्ला पूmटबल सङ्घ सप्तरीले हासिल गरेको छ ।
जिपी कोइराला फाउन्डेशन वीरगंजद्वारा आदर्शनगरमा जारी प्रतियोगिताको फाइनलमा सप्तरीले बारालाई शून्यका विरुद्ध दुई गोलअन्तरले पराजित गर्दै उपाधि हात पारेको हो । शनिवार सम्पन्न प्रतियोगिताको फाइनलमा उपाधि जिताउन सप्तरीका उज्ज्वल सिंह र देवस श्रेष्ठले एक/एक गोल गरेका थिए ।
विजेता सप्तरीलाई एक लाख एकाउन्न हजार नगदसहित शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र तथा उपविजेता बारालाई पचहत्तर हजार नगदसहित शिल्ड, मेडल तथा प्रमाणपत्र प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबू राउत गद्दीले प्रदान गरेका थिए ।
फाइनल खेलमा ‘म्यान अफ दी म्याच’ सप्तरीका अजय चौधरी घोषित भए भने उत्कृष्ट गोलकीपर रामरूप चौधरी भए ।
समापन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गद्दीले खेलकूदले स्वस्थ राख्दै अनुशासित बनाउने र शारीरिक विकासमा ठूलो मदत पुग्ने बताए । उनले देशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलमैदान नभएकोले खेलाडीहरूले सोचेअनुरूपको प्रतिफल ल्याउन नसकिरहेको बताए । उनले खेलाडीहरूको मनोबल उच्च राख्न प्रदेश सरकारले अधिकृतस्तरको सेवासुविधा दिने गरी कानून बनाउन लागेको बताए । मुख्यमन्त्री गद्दीले प्रदेश सरकार खेलकूद, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जिकिर गरे ।
कार्यक्रम फाउन्डेशन पर्साका अध्यक्ष महमद सहाबुद्दीनको अध्यक्षतामा भएको थियो ।